Mots du présidente
| | Affichages : 14604
Migadona indray ity ny Asaramanitra ifampiarahaban’ny ambanilanitra mandritra ny volana Janoary. Raha ny foto-pisainana malagasy no resahina, dia natao hirariana soa sy fanambinana ho an’ny sokajin’olona samihafa ny taom-baovao ka hanolorana solom-bodiakoho. Voakasik’izany ny ray aman-dreny, ny raiamandreny aman-panahy, ara-bakodrazana sy ara-piarahamonina, ny solontenam-panjakana, ny mpiara-miasa, ny havana aman-tsakaiza, ny namana sy tapaka, … sy ny maro hafa. Fotoan-dehibe ahafahanan’ny tsirairairay misaintsaina ihany koa ny fomba hampiharany ny tetikady novolavolainy hanatratrarana ny tanjona, ny vina ary ny nofinofiny izay antenainy hanjary vokatra azo tsapain-tanana ho fivelaran’ny ankohonany eny hipàka hatrany amin’ny fampandrosoana ny firenena mihitsy aza. Tsy diso anjara amin’izany fifampiarahabana izany: anareo mpamaky hajaina, isika mpikambana ao anatin’ny fianakaviamben’ny BIMTT, ny mpiara-miombon’antoka eto an-toerana na any ivelany fa indrindra ny tantsaha mpamokatra miara-miasa amintsika amin’ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Nandritra iny taon-dasa iny anefa, dia nifamahofaho teo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona ny mamy sy ny mangidy, ka rariny loatra raha ifampiarahaba isika. Koa fifaliana sy voninahitra lehibe ho ahy ny miarahaba anareo rehetra nahatratra ny taom-baovao 2013 : Ho taom-pahombiazana sy fahasalamana ary fahasoavana ho antsika rehetra anie ity taona vaovao ity eo amin’ny sehatra marolafy. Koa hadidy hahita ny tonony, hikapa hahita ny vaniny, hamboly hanana ny ambim-bava, ary hiompy ka hahavanona anie isika mianakavy. Ankoatra izay, lanja miakatra ny fiainana, koa noezahina nitondrana fanatsarana ny tefibika sy ny votoatin’ny gazetim-pifandraisana Tantely manomboka amin’ity laharana faha 78 ity. Tsy tontosa anefa izany raha tsy teo ny fiaraha-mientana avy aminareo mpamaky. Koa ankasitrahana ny soso-kevitra narosonareo, satria ny hevitry ny maro hono mahataka-davitra.
Tsiahivina fa anisan’ny antom-pisian’ny BIMTT ny fanandratana ny tontolo ambanivohitra. Koa toa ny fikambanana rehetra mikatroka amin’izany sehatra izany, dia manana ny fandaharanasa ho tanterahina mandritra ity taom-pamokarana 2013 ity koa ny Birao Ifandraisan’ny Mpampiofana eo anivon’ny Tontolon’ny Tantsaha. Ireto avy izany: Fiaraha-miasa miaraka amin’ny “Réseau FAR MADA” , ka isan’ny mpanentana amin’izany ny BIMTT. Eo amin’ny lafiny Asa fikarohana momba ny zezika volkanika “ZEVO” izay iaraha-miasa amin’ny CNRIT ary ny fanatsarana ny zotram-pihariana Saonjo atao miaraka amin’ny FOFIFA. Fiofanana eo amin’ny sehatra Iraisam-pirenena aty amin’ny Faritra Oseanina Indianina, iarahan’I Comores sy Madagasikara amin’ny CTA, izay mpiara-miombon’antoka amintsika. Tsiahivina fa fanatevenana ny fahaiza-manao amin’ny “Evaluation projet “Took-Kit” na teknika fanaovana tomban’ezaka no hatao amin’izany ka ny BIMTT no miantsoroka ny fandrindrana azy. Farany, Fampiofanana sy tetikasa momba ny fananan-tany eto Madagasikara ary fanohizana ny fomba fiasa isan-dohahevitra atao isan-tarika iaraha-misalahy amin’ny MISEREOR.
Etsy andaniny, misedra olana toa an’ny firenen-drehetra ny seha-pihariana momba ny fambolena sy fiompiana noho ny fiantraikan’ny fiovaovaon’ny toetrandro eto Madagasikara. Nahitana fihenana ohatra ny voka-bary tany Alaotra. Raha 6t no nandrasana dia 3t monja no azo. Etsy ankilany anefa, nahavelom-bolo kosa ny habetsahan’ny vokatra hafa toa ny voankazo teto amintsika raha ny habetsahany teny amin’ny an-tsena no asian-teny. Koa na teo aza ny fihenan’ny voka-bary tany amin’ny sompitr’ I Madagasikara, dia azo antenaina fa hitondra vahaolana maharitra ny asa fikarohana ifandrombonan’ny Cirad sy ny Fofifa momba ny fambolem-bary mifanaraka amin’ny fiovaovan’ny toetrandro eto Madagasikara. Ifotoran’ireo mpikaroka ireo mantsy ny fanararaotana entin’ny ny hafanana ateraky ny fiovaovan’ny toetrandro hanatsarana ny fambolem-bary manerana ny Nosy. Ho hitanao ao amin’ny pejy faha … ny antsipirihany mahakasika izany.
Eto am-pamaranana, maloka ny foto-piveloman’ny tantsaha noho ny kirizy lavareny. Tato ho ato anefa, dia hita soritra fa misy am-pahan’olana fototra nahitana vahaolana noho ny tsy filatsahan’ireo mpifanolana roalahy eo amin’ny lafin’ny pôlitika ho fidina . Koa antenaina fa hivaha tsy ho ela ny disadisa pôlitika mampikatso ny firenena malagasy ankehitriny. Enga anie, ho tena harena sy tosika amin’ny fampivoarana ny tanindrazana iombonana ny fiombonana ao anatin’ny fahasamihafana.
Samia ho tahin’Andriamanitra!